सावित्राको गोलले नेपाललाई जितायो, पुग्यो फाइनलमा ! « Dhankuta Khabar
सावित्राको गोलले नेपाललाई जितायो, पुग्यो फाइनलमा !
नेपाली महिला फुटबल टोली किर्गिस्तान जारी नादेझ्दा कप को फाइनलम पुगेको छ । ताजकिस्तानलाई मंगलबार १–० ले हराउँदै नेपाल अन्तिम उपाधि नजिक पुगेको हो । नेपाल ४ राष्ट्र सहभागी नादेझ्दा कपको दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुग्न सफल भएको हो ।
८५ औं सावित्रा भण्डारी सम्बाको गोलमा नेपाल विजयी भएको हो । गिता रानाको फ्रिकिकलाई सम्बाले हेडमार्फत गोल गरेकी थिइन । त्यहि गोल खेलको निर्णायक बन्यो । प्रतियोगितामा सावित्राको यो पाँचौं गोल हो ।
किर्गिस्तानविरुद्धको पहिलो खेलमा उनले ४ गोल गरेकी थिइन् । अब नेपालले बिहीबार हुने फाइनलमा उज्वेकिस्तानको सामना गर्नेछ । लगातार दुई खेल जित्दै उज्वेकिस्तान यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको छ । रोविन्ड रोविनको अन्तिम खेल आजै उज्वेकिस्तान र आयोजक किर्गिस्तानबीच हुनेछ । प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानलाई ८–२ ले हराउँदै नेपालले दमदार सुरुवात गरेको थियो । तर नेपाल दोस्रो खेलमा भने उज्वेकिस्तानसँग २–० ले पराजित भएको थियो ।
ताजकिस्तानले प्रतियोगितामा कमजोर सुरुवात गरेको थियो । ताजकिस्तानले पहिलो खेल नतिजा उज्वेकिस्तानलाई १२ –० को नतिजा सुम्पेको थियो । दोस्रो खेलमा ताजिकस्तानले किर्गिस्तानलाई २–१ ले हराएको थियो । प्रतियोगितामा उज्वेकिस्तान सबैभन्दा बलियो टोलीका रुपमा रहेको छ । ताजिकस्तानलाई १२–० ले हराएको उज्वेकिस्तानले नेपाललाई २–० ले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै आयोजक किर्गिस्तान अरु भन्दा कमजोर देखिएको छ ।